“Wax walba waan haggaajin doonaa” _ Toni Kroos oo ka hadlay xaalada adag ay ku jirto kooxda Real Madrid – Gool FM
“Wax walba waan haggaajin doonaa” _ Toni Kroos oo ka hadlay xaalada adag ay ku jirto kooxda Real Madrid
(Madrid) 31 Luulyo 2019. Laacibka khadka dhexe kooxda Real Madrid ee Toni Kroos ayaa sheegay in Los Blancos ay heysato xoogaa dhibaatooyin ah si ay isku wanaajiso xiliyada soo aadan kahor inta uusan bilaaban xili ciyaareedka cusub.
Toni Kroos ayaa dhinaca kale rajo wanaagsan ka muujiyay bilowga horyaalka La Liga ee dalka Spain.
Real Madrid ayaa haatan heleysa eedeeymo kala duwan kaddib markii ay guuldarooyin kala kulantay kulamadii saaxiibtinimo ay la ciyaareen kooxaha Atletico Madrid, Sevilla iyo Tottenham Hotspur.
Hadaba Toni Kroos ayaa kaddib guuldaradii 1-0 ahayd ay kala kulmeen kooxda Tottenham Hotspur wareysi uu bixiyay wuxuu ku sheegay:
“Waxaan ku jirnaa marxalad is diyaarin ah, waxaana iska cad inaan helnay waxyaabo badan oo aan horumar ku sameyn karno, kaddib wixii aan ku soo aragnay kulamadii ugu dambeeyay ee aan ciyaarnay”.
“Laakiin wali waxaan ku rajo weynahay bilowga horyaalka La Liga ee dalka Spain, iyadoo aan hagaajin doono wax walba”.
“Ciyaarta si xun ayaan ku bilowanay, kooxda naga soo horjeeda waxay ku ciyaartay qaladaadkeena, Muddo kadib, waan fiicnaanay waxaan helnay meelo banaan ah, laakiin guud ahaan waxaan qabaa inaan u qalanay guuldrada”.
Toni Kroos ayaa ugu dambeyntii hadalkiisa ku soo gabagabeeyay ka hadlida guuldaradii xanuunka badneyd ay kala kulmeen kooxda Atletico Madrid wuxuuna yiri:
“Waxaan dooneynay inaan u soo muuqano qaab kale, balse ujeedkeena koowaad wuxuu ahaa inaan soo fiicnaano kulan ilaa iyo kulan kale oo aan kaga bilaawano horyaalka seddex dhibcood, waxaan rajeynayaa in kulamada saaxiibtinimo ay naga caawin doonaan arrintaas”.
Maxay tahay caqabadda weyn ee hortaagan heshiiskii uu Paulo Dybala ugu wareegi lahaa Kooxda Manchester United?